Kooxda Chelsea oo ku soo biirtay tartanka loogu jiro saxiixa Habib Diallo – Gool FM
(London) 12 Nof 2019. Kooxda kubadda cagta Chelsea ayaa ku soo biirtay tartanka loogu jiro saxiixa xiddiga Metz ee Habib Diallo.
Shabakadda ciyaaraha ee Team Talk ayaa daabacday in Weeraryahanka Naadiga Metz ee Habib Diallo uu xiiso weyn ka helayo Kooxda reer England ee Chelsea.
Kooxda ka dhisan Galbeedka Magaalada London ee Blues ayaa saxiixa Habib Diallo doonaysa inay kaga adkaato kooxaha kale ee ay ka wada dhisan yihiin dalka Ingiriiska ee Tottenham iyo Liecester City oo dhankooda ka doonaya laacibkan.
24-sano jirkaan horumarka badan ka sameeyey ciyaarihiisa ayaa diiradda u saaran kooxo dhowr ah oo ka dhisan qaaradda Yurub suuqa kala iibsiga xiddigaha ee dib u furmi doona bisha Janaayo ee horraanta sanadka soo aaddan.
Chelsea ayaa la sheegayaa inay diyaar la tahay inay bixiso lacagaha lagu qiimeeyo laacibkan oo dhan 10 milyan oo gini oo u dhiganta 13 milyan oo dollar.
Habib Diallo ayaa dhaliyey siddeed gool 13 kulan oo uu horyaalka Ligue 1 u ciyaaray naadiga Metz xilli ciyaareedkan.